मेरो बुवाआमा तीन महिनाको लागि अष्ट्रेलिया आउनुभएको छ । उहाँहरू दुवैजना स्वस्थ नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूको भिसामा बीमा अनिवार्य भन्ने कुनै शर्त राखिएको पनि छैन । के उहाँहरूको बीमा नगराउँदा पनि हुँदैन?
भिसाको शर्त नभए पनि बीमा गराउनु अत्यन्त आवश्यक छ । बुवा आमा वा अन्य आफन्त यहाँँ आएर गम्भीर किसिमको बिरामी भइदिनु भयो भने तपाईंलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्न सक्छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा धेरैजनालाई भेटेको छु, जसले आफन्त बिरामी पर्दा वा आफन्तको मृत्यु हुँदा मानसिक पीडा र संकटका साथसाथ ठूलो आर्थिक क्षतिको पनि सामना गर्नु परेको छ । बीमा गर्नाले तपाईंको बुवाआमालाई कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आएमा आर्थिक रूपमा ठूलो संकटबाट जोगिन सक्नुहुन्छ ।
म अस्ट्रेलिया आएको ६ महिना भयो । मसँग सबक्लास ३०९ भिसा छ । मेरो श्रीमानले अस्ट्रेलियाको नागरिकता लिएका छन् । पछिल्लो समयमा आएर मेरो र श्रीमानको सम्बन्ध राम्रो छैन । मलाई मानसिक पीडा मात्र होइन, कहिलेकाही उनले पिट्ने समेत गर्छन् । म नेपाल फर्कन चाहन्नँ तर उनीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्छु । यसो गर्दा मेरो पीआरमा के फरक पर्छ?
तपाईं घरायसी हिंसा -Family violence_)को शिकार हुनुभएको जस्तो देखिन्छ । अस्ट्रेलियाको माइग्रेशन प्रणालीमा घरायसी हिंसासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ, जसअन्तर्गत पीआरको लागि आवेदन दिएको व्यक्ति घरेलु हिंसाबाट पीडित भएमा र त्यसको कारण सम्बन्ध टुटेमा पनि निजको पीआरको आवेदनले निरन्तरता पाउँछ । यस सन्दर्भमा तपाईंलाई माइग्रेशन सम्बन्धी परामर्श दिने वकील वा माइग्रेशन एजेन्टले उचित परामर्श र सहयोग गर्न सक्छन् ।
म नेपालबाट भर्खरै सिड्नी आइपुगेको छु । मेरो पढाइ मार्चबाट सुरु हुँदैछ । म पढ्न आएको कोर्स महंगो भएकोले अलि सस्तो कलेजमा पढौँ कि भन्ने सोच्दैछु । मार्चभन्दा पहिले नै कलेज परिवर्तन गर्न मैले के गर्नुपर्छ?
यदि ६ महिनाभन्दा पहिले नै कलेज परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो शैक्षिक संस्थाबाट रिलिज लेटर लिनुपर्दछ । कुनै गतिलो कारण नभइकन तपाईंको कलेज वा युनिभर्सिटीले तपाईंलाई रिलिज लेटर दिँदैन । बिना रिलिज लेटर तपाईंलाई अर्को शैक्षिक संस्थाले भर्ना गर्न मिल्दैन । केही नेपाली विद्यार्थीले रिलिज लेटर पाउनकै लागि नक्कली कागजात कलेजमा बुझाएको र कलेजले सो कुरा पत्ता लगाएर उनीहरूको भिसा क्यान्सल गराउनका लागि प्रकृया सुरु गरेको भन्ने खबर केही अगाडि आएको थियो । नक्कली र कीर्ते कागजात बनाउनु अस्ट्रेलियाको कानुनअनुसार दण्डनीय अपराध हो । रिलिज लेटर सजिलै निकालिदिन्छु वा बिना रिलिज लेटर नै सस्तो कलेजमा भर्ना गरिदिन्छु भन्ने आश्वासन कसैले दिन्छ भने त्यस्ता व्यक्ति वा कन्सल्टेन्सीसँग अलि होसियार रहनुहोला ।